May 30, 2018 Posted by Jhilko.com
–नारायण अधिकारी १६ जेठ । सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले विगतको भन्दा पृथक् बजेट आए पनि उद्योग व्यवसायमैत्री बजेट हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले नेपालीले बहुमत सरकारले ल्याउने बजेटको जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यस्तो बजेट आउन नसकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएझैँ उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित हुन नसकेको...बाँकी
May 29, 2018 Posted by Jhilko.com
१५ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको दिन आज शेयर बजार भने ९.१८ बिन्दुले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार ‘क’ वर्गका शेयर कारोबारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत २.०२ बिन्दुले घटेको छ । आज कूल १६७ कम्पनीको आठ लाख ४० हजार १७५ कित्ता शेयर रु ४१ करोड ७४ लाख ३६ हजार ९६८ मूल्यमा कारोबार भएको छ । आज बीमा उपसमूहको शेयर भने उकालो लागेको छ । सो समूहको शेयर ५.६९ बिन्दुले उकालो लाग्दा बैंकिङ १०.५, हो...बाँकी
अर्थमन्त्रीद्वारा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत, चक्लेट, चुरोट र मदिराको भाउ बढ्यो
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पूँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तियतर्फ १ खर्बसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको बताए। यो बजेट चालु वर्षको भन्दा ३७ अर्बले बढी हो। सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने भएको...बाँकी
आज पन्ध्र खर्ब बढीको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि रु १५ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार अपराह्न ४ बजे बोलाइएको संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संघीय बजेटका रुपमा आउने यो पहिलो बजेट स्थानीय र प्रदेश तहमा सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार...बाँकी
बेजोड स्वार्थको सङ्गम
May 28, 2018 Posted by Jhilko.com
—पत्याउनै पनि मुश्किल पर्ने कुरा यो छ कि एक अर्कासँग पूरै भिडिरहेका बेला, एक अर्काको अस्तित्वलाई नामेट पार्न लडिरहेकै समयमा पूर्व युथ फोर्सका अध्यक्ष, पूर्व जनयोद्धा मात्र होइन उच्च कर्मचारी अधिकारीको साँठगाँठमा कति खतरनाक गुरुयोजना बनाएर हत्याउन खोजिएको छ भन्ने कुरा समयबद्धसँग मौजुदा दस्तावेजबाट स्पष्ट हुन्छ । पत्याउनै नसक्ने तर सत्य सावित भएको छ यो । बेजोडको स्वार्थको संगम छ । —अनेक नामका सरकार आउँछन, जान्छन तर लूट निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने भनाइ एकअर्कासँग अस्तित्व सिध्य...बाँकी
१४ जेठ – नुवाकोट । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । यही जेठ ६ गते काठमाडौँबाट शुरु भएको नेपालीसहितको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै रसुवाको रसुवागढी (टिमुरे)बाट केरुङसम्मको अध्ययन पूरा गरेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए । “काठमाडौँबाट शुरु भएको अध्ययन केरुङसम्म पुगेर फर्किएका छौँ ।” विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका उपाध्यायले भने, &ld...बाँकी
आर्थिक वृद्धि ५.९ प्रतिशत, ऋणले थिँचीदै नागरिक
एक दशकसम्मको औषत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । पटक÷पटक संशोधन गरिएको यो अनुमान लक्ष्य भन्दा १.१ प्रतिशतले कम हो । संघीय संसदमा पेश गरिएको चालू आव २०७४÷७५ को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७४ ले त्यस्तो अवस्था देखाएको हो । चालू आवको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ र ७२.४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आवमा प्रतिव्यक्ति आय...बाँकी
पूर्ण अनलाइन ट्रेडिङ्ग साउनदेखि मात्रै, परीक्षणका लागि कम्पनी छनौट हुँदै
May 27, 2018 Posted by Jhilko.com
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड ९नेप्से० ले पूर्ण अनलाइन ट्रेडिङ्ग प्रणालीको परीक्षण गर्न कम्पनी नियुक्तिको प्रक्रिया भर्खर अगाडि बढाएको छ । नेप्सेले शुक्रबार विश्वव्यापी रुपमा उक्त प्रणाली सञ्चालनको लागि कम्पनी छनौट गर्न शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । नेप्सेले एक महिनाको समय अवधि राखेर विश्वव्यापी रुपमा बोलपत्र आह्वान गरेको हो । असार दश गतेसम्म ईच्छुक कम्पनीलाई बोलपत्र पेश गर्न समय दिइएको छ । वाईको प्रालीको तयार पारेको अनलाईन अनलाइन ट्रेडिङ प्रणालीको परीक्षण, समस्या समधान र प्...बाँकी
के बजेटसँग जोडिएला जीवन ?
May 26, 2018 Posted by Jhilko.com
आर्थिक विषय अत्यन्त सम्वेदनशील हो । यो प्रत्येक व्यक्तिसँग गाँसिएको हुन्छ । यो राज्यको वित्त नीतिबाट सुरु हुन्छ र जनतामा अन्त्य भई पुनः फर्कन्छ । यो साइकलले निर्धारण गर्छ मुलुकको समृद्धि, स्थायित्व । त्यो भनेको सरकारको बजेट हो । आगामी आ.व.को बजेट जनताको जीवनसँग जोडिएला ? यसले निर्धारण गर्नेछ, संघीयताको भविष्य । राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि ल्याउन लागिएको यो नै पहिलो बजेट हो । लामो एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको अभ्यासपछि आउँदै गरेको यस बजेटले सबैको ध्यान तान्नु स्वाभाविक प...बाँकी
वित्तीय संघीयताको आधार ः वित्तीय आयोग खोई ?
सीता अधिकारी देश तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक तवरले संघीयतामा गइसेको छ । यो एउटा पक्षको टुङ्गो लागे पनि अन्य दुई पक्षहरु प्रशासनिक र वित्तीय पक्षका विषयमा गति लिन सकेन । राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय पक्षलाई संघीयतामा सँगसँगै नलैजाने हो भने यसको टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ नबुझिएको हो कि बुझ्न नचाहेको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सही र क्षमतावान कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नहुँदा प्रशासनिक पक्ष अत्यन्त फितलो भएको छ भने राजनीतिक र प्रशासनलाई चलायमान ग...बाँकी